जहाँ, आफ्नो राय मा, सबै भन्दा राम्रो संग सम्पर्क को एक महिला मेरो उमेर छ । नमस्कार महिला जरूरी छैन सजिलो छ । छन्, थुप्रै तरिकामा पूरा गर्न महिला । सुन्दर जनावर हो, धेरै स्मार्ट छ, तर पनि एक काम झोला । महिला जस्तै पुरुष, छन् पनि एक झुण्ड को जनावरहरू । धेरै मानिसहरू छन्, जसले न्याय. आफ्नो मित्र राम्रो प्रयास गर्नुहोस् । क्लब र संगत हो सधैं को लागि एक राम्रो विचार थाह रही मान्छे ।, संघ सही हुनुपर्छ । नृत्य त्यसो गर्नुपर्छ किनभने तिनीहरूले हास्यास्पद छ, छैन किनभने को महिला । किनभने तपाईं चाँडै गर्न सक्छन् परिवर्तन विपरीत प्रभाव रूपमा यो इरादा थियो । तपाईं बुझ्न गर्नुपर्छ के तपाईं सबैभन्दा आनन्द, गरिरहेको छ र त तपाईं गर्नुपर्छ कल्पना प्रश्न भने महिला पनि के हास्यास्पद छ । किनभने मात्र ती जसले पठाउनु नै वेभलम्बाइ हुनेछ स्वागत छ । लागि रूपमा इन्टरनेट पोर्टल, त्यसपछि जहाँसम्म यी लाभ फिक्री छन्, तर तिनीहरू सबै पनि एक सानो बिट संग ध्यान को एक धेरै. कसैले धेरै सावधान छ संभवतः पूरा चुनिएकाहरूका लागि (रसायन). पनि विचारणीय छ झुण्ड, जो एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. तपाईं प्रतीक्षा छ, त्यहाँ यति-भनिन्छ सेतो शूरवीर देखिन्छ मा मित्र को एक समूह, र प्रिय अब त्यहाँ छ, तपाईं बस प्रत्येक अन्य थाह. यो सबै भन्दा राम्रो छ यो मिश्रण, यो संभावना पाइन्छन्. त्यसपछि बारी गर्न एक यात्रा, एकल दल, एक क्लब को सदस्य आफ्नो रुचि, इन्टरनेट, वा बस मा आफ्नो मित्र को सर्कल वा कम्पनी एकल यात्राको यो बाहिर प्रयास गर्न. तर, एउटा कुरा सधैं धेरै महत्त्वपूर्ण छ (शब्दहरू केही बिन्दु मा, पहिले नै परित्याग गर्न), फेंक छैन राइफल मा अन्न खन्न गर्न एक ड्रप मा. भने त, त्यसपछि मा एक मोड वा अर्को यो काम, संकेत, एक महिला को ध्यान, साहस (यो एक राम्रो साँझ, हामी प्रेम यो बारम्बार, तर म । म बस भन्न थियो कि एक अद्भुत साँझ र एक विशेष छाप छ । पछि चलिरहेको महिला छ छैन यति उपयोगी र चाँडै रूपमा सेवा एक राम्रो पास छ । शान्त र कोमल. यो त व्यक्तिगत, तपाईं बरु मर्न वर्ष पहिले केहि को लागि तपाईं को लागि समय छैन. यति भने, कहिलेकाहीं तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ»हो»भन्न भइरहेको जान अनुमति, र तपाईं यो मन छ, वा सोध्न कसरी कुराहरू जाँदैछन् । तपाईं के भने, तपाईं पहिले नै हो भाग मा चर्चा । के यो केही दिन को लागि. यदि हावा राम्रो छ, सोध्न, एक पटक भने तर त्यो पूरा गर्न चाहन्छ । तर त्यो.
किनभने तपाईं सिक्न छैन थाह राम्रो. एक वा अर्को तरीका मा, तपाईं हुनेछ. बस प्रयास गर्नुहोस् । त्यसैले म एक्लै गए । त्यसैले बैठक थियो बस पार्क मा एक पैदल. सुरुमा त्यहाँ छ केवल एक सानो एक, तर कुनै तरिका, यो सधैं एक तरिका फेला. अन्त मा, हामी आए दिन र रात र किलोमिटर । यो मजा को एक धेरै. के मलाई प्रहार थियो यो स्नेह संग जो उहाँले हेरविचार गरे, मलाई सधैं सोधेर थियो भने म सबै सही र खाने संग मलाई । यो लाग्न सक्छ जस्तै एक अनौठो घण्टा, तर हामी प्रत्येक अन्य ज्ञात छु एक धेरै लामो समय, र उहाँले कहिल्यै गरेको यो उनको लागि. उहाँले कहिल्यै पनि स्वीकार एक कुकी. रेल मा, उहाँले जानाजानी देख्यो मेरो, उहाँले, उदाहरणका लागि, सोधे भने म उहाँलाई अर्को बसिरहेका सीट मा. समयमा हाम्रो हिंड्न, हामी बारेमा धेरै कुरा हाम्रो परिवार. हामी सबैभन्दा बारेमा कुरा प्रेम, सम्बन्ध, र छोराछोरीलाई । उहाँले मलाई सोधे, उदाहरणका लागि, कसरी गरौं म मेरो छोराछोरीलाई लाग्छ र कसरी म कल्पना आदर्श साथी । यसैबीच, उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले अझै पनि छैन छन् एक पत्नी, जसलाई उहाँले भेट, यो भ्रमण एक सफलता थियो, र उहाँले बन्द गरे मेरो टोपी । उहाँले भन्नुभयो कि हामी मौका भ्रमण गर्न अधिक रोचक ठाउँमा छ । आफ्नो योजना संग, अर्को दुई वर्ष मा भरिएको सकिन्छ. तर त्यसपछि, अनौठो कुरा भयो । उहाँले मलाई सोधे भने म रुचि थियो र भने, उहाँले प्राप्त गर्न सक्छ थाह देखि तपाईं उहाँलाई । मर्यादा म योग्य हुनुहुन्छ । म कुनै भन्नुभयो, र उहाँले भन्नुभयो, न म, न त जवान मान्छे, न त गाढा हुन्छन् । अर्को समय, उहाँले मलाई सोध्नुभयो के मेरो परिवार थियो लाग्छ भने हामीलाई दुई हिंडे माध्यम क्षेत्र मा एक्लै रात । परिवार को दन्त चिकित्सक, जो छन् आज यहाँ भने जस्तै हावा मा. वास्तवमा, उहाँले रुचि, मेरो परिवार र उहाँले सधैं आदेश सुन्दर ग्रेग र चमत्कार कसरी कुराहरू जाँदैछन्. को अन्त मा पदयात्रा, म सम्झना कि उहाँले भन्नुभएको थियो एक पटक यो धेरै महिना पहिले संग एक सम्भव पैदल यात्रा साथी । छन् भने हेर्न कुनै चासो त्यहाँ । म यो थियो, आज सम्म, तर म भूल. तपाईं मलाई मदत गर्न सक्छ, र तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ. किनभने तपाईं मलाई हिंड्न, शिविर जाने, हेर मेरोर त्यसपछि जस्तै कुराहरू भन्न ।. कृपया माफ लामो पाठ, र पढाइ लागि धन्यवाद । नमस्कार, म एक जवान मानिस को पूर्ण उमेर । म छु थियो एक अनुभव को धेरै र सम्बन्ध महिलाहरु संग मेरो उमेर । म भएको छु भर्ती सबैभन्दा परिपक्व महिला लागि अब एक वर्ष. यो सामान्य छ । आकर्षक र शायद पहिले नै धेरै छ मेरो मन हो, तर म परवाह छैन अब, किनभने म चाँडै हुनेछ छुट्टी मा मेरो बुबा संग, म सोध्न चाहन्थे तपाईं कहाँ, कसरी र जब म थाहा विरोधी-कवक बालिका राम्रो छ । त्यसैले म छु एक स्नातक फेरि, को पाठ्यक्रम, बाहिर झुन्डिएको र सिक्ने को बारे मा महिला, तर यो सजिलो छैन, गाउँ वा सधैंभरि, किनभने म छु धेरै ठूलो र स्थिर छ । खैर, यो अब जस्तै एक आँखा लागि भोज रूपमा, उहाँले देख्नुहुन्छ र त्यो देख्नुहुन्छ, म छु सेन्टिमिटर अग्लो छ, र म पछि छु आशा नरक जस्तै, एक महिला जो सबैभन्दा सानो छ, तर यो गाह्रो छ.
कहाँ मा रूपमा, मानिस, तपाईं को सबैभन्दा ठूलो मौका पूरा गर्न कसैले देखि अनुप्रयोग. जहाँ तपाईं पूरा गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो महिला लागि एक रात को ज्ञान छ । यसको जवाफ छ. यो पुरानो र अब मजा । नमस्कार, त्यसैले म थियो हिजो र हिजो पहिले दिन, समयमा हाम्रो पार्टी, सुन्दर एक महिला थाहा छ । यो समस्या थियो कि कम से कम सुन्दर महिला सधैं यात्रा मा अधिक को समूह महिला वा पुरुष र बस. (छ भने) वा कुरा गर्न प्रत्येक अन्य मा एक सरल तरिका र म गर्न सक्छन्, हो, यो सिर्फ बाहिर काम गरेन र भन्न घर. र कसरी गर्न सबै भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया कस्तो छ र कुराकानीको विषय? कसरी म गर्न सक्छन् सबै भन्दा राम्रो समाधान यस्तो समस्या? धन्यवाद तपाईं बताउन अन्य अतिथि कामदारहरूको वा हटने छैन छौं भने तपाईं सँगै अझै, तर जो यो छ, यो नमुना लामो बन्द मात्रा छ । कसरी तपाईं दिन जाँदै हुनुहुन्छ. यो तपाईं को लागि पनि धेरै, वा यो अर्को चरण हो । त्यहाँ हुन सक्छ किनभने अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू म काम गरिरहेको छु मा भ्रमण वा मलाई टिप्न. उहाँले मलाई सोधे भने म आउन सक्छ घर देखि काम र मलाई टिप्न. तर, म पछि बस सुरु रही थियो, हामी जान सहमत एक महिना माथि टिप्न.
कसरी तपाईं दिन जाँदै हुनुहुन्छ
म एक गम्भीर प्रश्न लागि सबै मानिसहरू, जुनसुकै उमेर को. मलाई थाहा छ कि सबै मानिसहरू अलग हो, र किन कि म सोध्न लागि सबैको व्यक्तिगत राय छ । हरेक मानिस भेट्छन् अधिक या कम सुन्दर र अग्लो महिला भनेर उहाँले थाह, तर को पाठ्यक्रम संग प्रेम मा पतन यी मध्ये एक अग्लो महिला सबै छ तपाईं यो के गर्न सक्दैन, यो नै तरिका हो । मेरो प्रश्न: महिला कस्तो हुनुपर्छ, वा महिला कस्तो हुनुपर्छ विशेषताहरु तपाईं को लागि, म भन्न हुनेछ: म एक काल्पनिक. म अर्थ छैन भनेर केहि संग के गर्न छ के यो पक्ष, तर केवल चरित्र संग. वा छैन । म एक भावना छ कि सबै महिला, के तिनीहरूले चाहनुहुन्छ वा छैन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ, एक सम्बन्ध छ, र अन्य एक मात्र चाहन्छ सेक्स । र कहाँ पाउन यस्तो महिला । म थियो बस जस्तै शारीरिक सम्पर्क एक महिला संग सेक्स बिना.
बस आवश्यक एक सानो
त्यो मलाई बताउँछ कि म छु धेरै मायालु छ, तर दुर्भाग्य, यो असम्भव छैन आँसु बगाउन मा यो तरिका हो । मौका के-के हुन्, एक महिला लागि विनिमय मा लाइन?. मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महिला मेरो उमेर पाउनुहुनेछ यो तरिका बस नीरस, पनि एक धेरै युवा उमेर, एक्लै गरौं ।
← प्रेम डेटिङ साइट
च्याट कोठा च्याट अनियमित →